Ukuthweswa iziqu imisebenzi njalo ukukhombisa amakhono nolwazi aluthola ngesikhathi ukuqeqeshwa. Ngenxa yalokho yemisebenzi walulama ukubaluleka esisebenzayo, njengoba akusho e iziphakamiso ngcono izinqubo ezikhona.
Kungani zichithe Ukuvikelwa?
Bathole amakhono ngqo umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho - lena main ukubaluleka ngokoqobo mqondo. Isibonelo abaqeqeshwayo umsebenzi ukukhetha isihloko yabo isithakazelo ngokuxoxisana Project Manager. Ukuze ugweme ukungafani ekuvikelweni imisebenzi eyenziwa ngefomethi, isikhungo esithile.
Kuncike kuba ukubaluleka ngokoqobo mqondo. Isibonelo ukuthi baphathe abanye imiphumela emihle ukuze kuzuze umphakathi, sesimanje ibhizinisi, Izindleko nokwehlisa, umnikelo yesayensi ekuthuthukiseni le mboni. Ingxenye imibono ezithakazelisayo kuthathwe ukusebenzisa imisebenzi esele kuyaphothulwa, kulungiswe, noma ukukhonza njengesisekelo ukutadisha Yiqiniso esilandelayo.
Ezimisele ngokuhlanganyela ukubaluleka ngokoqobo mqondo. Isibonelo isifundo kukhethwa izimo ezikhona njengamanje. Lokhu kungaba yokuthuthukisa izinga lenkonzo ngenxa yezinguquko inqubo yokwamukela izivakashi, noma ukwethulwa ubuchwepheshe obusha ukwenza ezihlukahlukene izinqubo ucwaningo nentuthuko izikhungo.
Kukhethwe kahle ukubaluleka eside ngokoqobo mqondo. Isibonelo bangenzela indaba ephathwayo - ukubuyekeza langempela indaba ephathwayo, okuyinto uhlala esikhathini esizayo. Ngakho, leli sondo okusungulile akwenzi mqondo, futhi ikhambi lenkinga ngaphandle kokusebenzisa amandla amaningi kwencika esiqotho endleleni abahlinzeki kanye abathengi ngokufanayo ukukhanya.
Inhloso mqondo ezingeni lokuhlela kungaba nzima ukubona umehluko, kodwa ukuqaliswa imiphumela emihle kuwusongo imisebenzi noma izinkinga asihlobene. Ukuze uqonde lapho umsebenzi kumele sigcwaliswe luzakwenziwa igxathu negxathu plan of action kanye zokukhokha eyabelwe Ngamunye kubo. Isikhathi ucwaningo ngokuvamile kwenzeka phakathi nezinyanga eziyisithupha. Kodwa abafundi wemfanelo baqale ukucabanga ngakho ngaphambili ngokuhamba.
Bachelors nochwepheshe (okuyinhloko): Ngakho, izinyathelo ezimbili ukuqinisekiswa bukhona uhlelo lesimanje imfundo ephakeme. Kusho ukuvikelwa double we idiploma. Ngakho-ke, umgomo we mqondo esigabeni kokuqala kungase kuhambisane lokuvala indaba ephathwayo.
Izinketho izindawo Ukuvikelwa
Imisebenzi mqondo kwakhiwa kuncike hlobo umphumela futhi isicelo. Kungaba:
Ukuqhuba trainings yokuthuthukisa amakghono wabasebenzi.
Ukwethulwa ukuqeqeshwa nocwaningo izinhlelo.
Ukudalwa ubuchwepheshe ukuthi kungenziwa kamuva lobunikazi.
umsebenzi Creative ukuze Ukukhulisa iphrofayili imisebenzi yamasiko.
amafomu Ucwaningo amadivayisi, imishini, landscape.
Ukuhlolwa yezakhiwo, okuqukethwe imisebenzi yamasiko.
Izinhloso mqondo ingase ihlanganise amasu athuthukiswe ngesisekelo ukusetshenziswa zangaleso ezihlongozwayo okunengqondo ngokwengeziwe kwezinsiza. Ukuvikela imibono yakho efundisa Ochwepheshe esizayo ukuvikela umbonwabo bese uthole imiphumela yabo oyifunayo. Reveal ikhono lazo ukuthola, akubona bonke, kodwa ngesisekelo imisebenzi esizayo ayovulelwa. ngokuvamile kubelula ukuba nokuqeqeshwa professional emsebenzini esizayo.
A isethulo efanele imibono
Ucwaningo emsebenzini mqondo kumele okwethulwa isitayela ibhizinisi. Ukuyeka le nkulumo evela ngazo umuntu wokuqala. Kungafaka iziphakamiso: ukubaluleka ucwaningo ... izibalo kwangaphambilini ukukhombisa ... ukwandisa ukusebenza kahle ... Ukuziletha imibono amaqiniso livela kumuntu wesithathu.
Lezi zifundo kufanele bavezwe ukusebenza okuthuthukisiwe. Ngokuvikela ulwela njalo umfundi. Uma uhlelo lwekhompyutha, kufanele sinciphise isikhathi okusebenzela kuyo imishini noma ukunciphisa izindleko mabutho angabantu. Ngesisekelo ezisunguliwe lobuchwepheshe wabeka ukwanda ukusebenza kahle.
lodaba ukuze babe munye, futhi ukubheka inkinga ehlukile. Ngakho, imiphumela kanye neziphakamiso kuyoba esiyingqayizivele, futhi oqhubeka ukubaluleka esisebenzayo umsebenzi.
isicelo Engokoqobo Yezindaba mqondo kuletha izinzuzo ezingokoqobo izinkampani. Ngakho-ke ungakhohlwa mayelana ohlangothini kwezomnotho, lapho izibalo zibalwa payback we isingeniso lendlela ezintsha noma ubuchwepheshe. Zonke amafomula izibalo umphumela wokugcina ingacosha nathishela. Nokho, ukusebenza umqondo eziyisisekelo kufanele kube bebodwa.
Inzuzo esisebenzayo kwasekuqaleni ethathwa umfundi, kuphakamisa sinesimo sengqondo, isipiliyoni idatha ukuthola nokuhlaziya. Le nkampani ithola project iziqu njengoba injalo iluhlaza. Ukuqalisa ke kuzodinga ukutshalwa impahla. Ngokuvamile ahole sesimanje we sipho abathweswe iziqu yimpumelelo.
At inhliziyo isibonelo sokuqala basebenzisa lawo manga izibalo umfundi ukusebenza izinhlelo ngolimi eziyinkimbinkimbi. Student wacelwa ukuba ufake ukuqeqeshwa okuyisisekelo ngonyaka ngaphambili, esekelwe sebelazi eziphelelwe labetibambile ikhompyutha siqu ezingeni umsebenzisi abanolwazi. izinkomba Statistical iphakeme kakhulu emva kokuthi ukuhlolwa kwenziwe, okuyinto usezuze ukubaluleka ngokoqobo mqondo.
Ukuze uthuthukise muzi umgwaqo idiploma algorithm kwahlongozwa ngokubala traffic ukunyakaza ngendlela uhlelo kancane enengqondo. Amatshe ngokuthuthukisa isimo siqala ukuba sinciphise amazinga ukuminyana emigwaqweni. ukubala Economic wawucacile: ukonga isikhathi kanye nemali yezakhamuzi kulengqungquthela yizimpahla futhi abagibeli.
Kusibonelo yokugcina, ukuqasha abasebenzi abasha ukuthuthukisa ukuhlolwa ezengeziwe ukunquma ukufaneleka kanye kuhloswe ukuthole kule nkampani ezihlongozwayo. Izinkomba zomnotho kwakungamadodana ukwehla izindleko kwabasebenzi yosesho kanye nokuqedwa lokushiya kwabasebenzi.
Ekuqaleni mqondo uchaza okushiwo izinkinga ezikhona. Emzimbeni yephrojekthi ezibhekwa izimbangela ngaphansi ukusebenza. Isiphetho kuhlanganisa iziphakamiso ngcono futhi ekukhuleni wenkampani. Futhi ungakhohlwa ngezinzuzo kwezomnotho.
Ingatholakala kanjani okukhethekile "Design kwemvelo yezakhiwo"
Uyini isithiyo umsindo. Breaking the isithiyo umsindo
Visor kuvulandi: incazelo, izinhlobo, ukufakwa izici